Doorashada Somaliland ka dhici doonta maalinta Isniinta iyo sida loo codayn doono. Cabsida la qabo iyo xalka. | Awdalpress.com
Doorashada Somaliland ka dhici doonta maalinta Isniinta iyo sida loo codayn doono. Cabsida la qabo iyo xalka.
Waxa Daabacay staff-reporter on Nov 11th, 2017 and filed under Daily Somali News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Awdalpress – London – Shacabka reer Somaliland ayaa bishan November 13keeda sannadkan 2017ka u dareeraya doorasho la filayo in ay u dhacdo si xalaal ah. Dadka codayn doona ayaa ah kuwa haysta kaadhka cod-bxinta amma warqad la siiyey dadka uu kaadhkaasi ka lumay. Goobaha codbixinta ayaa goobta ugu badan lagu soo ururiyey 700 oo qof, waxana maamulkeeda wadaagaya 4 mas’uul oo socda Komishinka, 3 ka socda xisbiyada, qof ka socda muraaqibiinta ama kor-joogayaasha iyo hal askari. Haddii ay goobtu noqoto 701 iyo wax ka badan, waxa loo kala jabinayey laba goobood. Sidaasi daraaddeed ayaa la sheegayaa in tirada dadka goobaha codaynta u dareerayaa ay badankoodu noqdaan inta u dhaxaysa 500 illaa 700 oo qof. Goob walbana waxa yaala magacyada tirada dadka goobtaasi ka codaynaya oo keliya.
Xubnaha xisbiyada ayaa sida la sheegay haysta App lagu sawirayo sida ay hawshu u socota amma marka ay codaynta goobtu dhammaato uu xisbi walba ku sawiran doono sida ay xisbiyadu u kala heleen codadka, kadibna uu xisbi walba u gudbin doono xarunta xisbiga ee lagala socdo sida ay codbintu u dhacday.
Qaabka noocaasi ah oo ahaa kii fashiliyey doorashadii la kala boobay ee Kenya. Ayey Somaliland iyo xisbiyadooduna nasiib u heleen. Sidaa awgeed ayaa doorashadani loogu malaynaa in aanay noqon doonin mid la is dhaco. Laakiin waxa haddana la sheegayaa in gobollada bariga sida goobaha Caynaba oo wakhtigii kaadh qaadashada la siiyey tirooyin ka badan goobaha kale ee dalka iyo meelo kale ayaa laga cabsi qabaa in lagu shubto, taasina waxa wal wal badan ka qaba hawl wadeennada xisbiga Waddani.
Dadka la sheegay in aanay wadan Kaadh, balkiisana la siiyey warqad caddayn ah ayaa iyana ah mid muhmal keentay, oo shaki badan abuurtay, waxase la noo caddeeyey in aanay dhici karin cid sawirku indhahooda qaban waayey oo baddalkeediina warqad la siiyey. Haddiise ay jiraan dad warqado wataa waa kuwa sheegtay in Kaadhkii ka lumay. Haddii uu been sheegay qofkaasi oo uu doono in uu kaadhkiisa mar labaad ku codeeyana, waxa la noo sheegay in codkiisii sidaa ku gubanayo.
Dhinaca ammaanka gobollada Burco, Awdal, Hargeysa iyo Salal waxa la sheegayaa in taageerayaasha xisbiga Kulmiye ay wadaan abaabul hoose, abaabulkaasi oo la doonayo in lagu khal khaliyo ammaanka iyo habsami u socodka doorashada. Waxana arooryada hore loo kala badanayaa goobaha codbixinta, si looga hor tago rabshado bilaabma galinka danbe.
Calaa kulli xaal, wararka illaa immiga na soo gaadha ee ku saabasan qaabka loo codayn doonaa waa sidaa, wixii ka soo kordha illaa berrina waan idinla socodsiin doonnaa.
This post has been viewed 8135 times.